Esi zụta HTC One M9 na Spain? | Gam akporosis
Esi zụta HTC One M9 na Spain?
Alfonso de Frutos | | HTC, Nkuzi
Onye nwe obodo Taiwan na-achọ ịmalite ọhụụ ọhụrụ ya, nke ọhụrụ HTC One M9, na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ahịa. Ngwaọrụ nke rutere na ụfọdụ obi abụọ n'ihi nsogbu na-ekpo ọkụ na-akpata ya, ọ bụ ezie na ngwanrọ ngwanrọ kachasị ọhụrụ ọ natara edozila nsogbu niile. You chọrọ inwe otu na nma ọ bụ ị maara otu esi azụta HTC One M9 na Spain? Anyị na-eduzi gị.
Nke mbụ, ị ga-eburu n'uche na e nwere ọtụtụ ụzọ iji nweta ọnụahịa ahụ kemgbe, ma ọ bụ zụta ya ozugbo ewepụtara na-enweghị ịbanye ụdị nkwekọrịta ọ bụla, ma ọ bụ site na onye ọrụ ekwentị. Nọgide na-agụ isiokwu a ka ịmara otu esi azụta HTC One M9 na Spain, cheta nke ahụ Eprel 10 na-esote ọ ga-aga ahịa!
Anyị na-akọwa otu esi azụta HTC One M9 na Spain naanị na mfe
Mụ onwe m anaghị akwado ịzụrụ ọnụ ụlọ ejikọtara na ụlọ ọrụ ekwentị maka ọtụtụ ihe: ịmalite ndị HTC One M9 pinned na onye ọrụ ga-abịa na ahihia nke ngwa ha na-agụnyekarị. N'aka nke ọzọ, anyị ga-abanye nkwekọrịta nke na-adịgide adịgide, yabụ, m na-ahọrọ ịzụta ya n'efu. Ma ọ bụrụ na ị ka na-ahọrọ ọdụm ọdụm iji wee rite uru na mwepu ego, gaa na ụlọ ahịa ọ bụla nke onye ọrụ gị, ma ọ bụ ekwentị iji hụ onyinye kacha mma iji zụta HTC One M9.
Ọ bụrụ na ịmaghị otú ịzụta HTC One M9 na Spain n'ụzọ zuru ezu wepụtara nhọrọ dị nnọọ mfe: ụlọ ahịa nkịtị ma ọ bụ ịntanetị. Eze nke ịntanetị bụ Amazon ọ bụrụ na ịchọrọ inweta HTC One M9, site na ụlọ ahịa ya Nwere ike ịgba akwụkwọ ya na ọnụahịa nke euro 749.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụtụrụ ya na ụlọ ahịa, ị nwere ike ịga na Corte Inglés webụsaịtị wee dee ya na bulie ya na nke ọ bụla n'ime isi ihe ị ere mgbe odi. N'ezie, dozie pọtụfoliyo ahụ n'ihi na ọrịre aga elu 100 euro tụnyere Amazon.
Ọ bụrụ na ịnọghị oke ọsọ ọsọ, ọ kachasị mma ichere maka Eprel 10 na-esote. N'ụzọ nke a, dị iche iche ndị nkesa ga-enwe ya maka ire na i nwere ike ịchọ ihe ndị kasị echekwa nhọrọ, ebe ọnụahịa ga-adị n'etiti euro 700 na 800.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Esi zụta HTC One M9 na Spain?
Sorin atanasiu dijo
1. Zuo ohi n’ụlọ akụ.
2. Zụta ihe ọhụụ # HTCOneM9
3. Chekwaa ego iji zụta M10 na ọnwa isii.
Zaghachi Sorin Atanasiu
Ọ dịlarị ire ere na ụlọ ahịa Vodafone.
Jiayu S4, 4.7-inch nke 64-bit ọnụ na USB Type-C
Motorola enweghị mmasị n'ịhapụ mbadamba, maka ugbu a